Duqii degmada Maxaas oo qirtay in ay Al-Shabaab xiriir lasoo sameysay
Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale ayaa loo maxkamadeynayaa inuu fududeeyay qarax lagu khaarijiyey ku xigeenkiisa.
MUQDISHO, Soomaaliya – Duqii hore ee degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan, Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale, ayaa qirtay Khamiistan in ay Al-Shabaab xiriir kala soo sameysay qaraxii lagu dilay ku xigeenkiisii.
Cilmi ayaa u sheegay Maxkamadda Ciidamada in uu wicitaan ka helay sarkaal Shabaab ah oo aad looga yaqaano halkaas.
Sidda ay sheegeen goobjoogeyaal maxkamadda ku sugnaa, Cilmi ayaa qiil ka dhigtay in loogu goodiyey "in la khaarjinayo".
Cawaale iyo sarkaal hore oo boolis ah, Nuur Ibraahim Mahad Alle, iyo Cawaale ayaa sidoo kale lagu eedeeyay in ay fududeeyeen weerarkaas.
Maxkamadda ayaa la horgeeyay caddeymo ay ku jiraan wada hadal dhanka telefoonka ah ee dhexmaray shaqsiyaadkan.
Cabdirashiid Cusmaan Cabdi, gudoomiye ku xigeenkii hore ee Maxaas, ayaa bishii April 2019 ku dhintay qarax ay goob maqaaxi ah ugu dhejiyeen labadda shaqsi, kuwaas oo meesha ka maqnaa xiligaas.
Xeer-ilaalinta ayaa sidoo kale waxay dacwad kusoo oogtay ruux kale oo lagu magacaabo Cali Axmed Guure [Cali Qaawane]. Mr Qaawane waa maqan kuma jiro gacanta hay'addaha cadaaladda.
Dacwad oogeyaasha oo xubnahan ku eedeeyay in ay abaabulka shirqoolka qeyb ka ahaayeen, ayaa dalbaday in dil toogasho lagu xukumay Cawaal iyo Mahad Alle, oo maxkamad kasoo muuqdey.
Cali Qaawane oo xoogaga gacansaarka la leh Al-Qaacida ka tirsan, ayaa la aaminsan yahay in uu yahay ruuxa lasoo xiriiray Cawaale una cagajugleeyay isla markaana u dhiibay walxaha qarxa.
"Si ay ugu waano qaataan qaataan mas'uuliyiinta kale ee xilalka loogu dhiibay si ugu adeegaan bulshadda, balse kula shaqeynaya argagixisadda, waa in dil toogasho lagu xukumaa eedeysaneyaasha," ayay sheegeen.
Qareenadda eedeysaneyaasha ayaa codsaday in kiiska dib loo eego laguna tixgeliyo Cawaale shaqadii uu u soo qabtay degmadda oo uu xilka ka hayey muddo 90-casho ah.
Maxkamadda Ciidamadda Qalabka Sidda ayaa waxay shaaca ka qaadey in ay dib kasoo sheegi doonto fadhiga xiga iyo goorta ay soo saareyso go'aanka ugu dambeeya ee kiiskan aadka u culus.
Qarax lagu dilay mas'uul oo ka dhacay Soomaaliya
Soomaliya 19.04.2019. 16:53
Al-Shabaab ayaa dusha saaratay mas'uuliyadda dhacdadaasi oo khasaaro dhaawac keentay.
Al-Shabaab oo iska hor-imaad looga dilay "sarkaal Kenyaan ah"
Soomaliya 16.06.2019. 08:25
Shaqsiyaadka caanka ah ee lagu la'yahay fatahaadaha Beledwayne
Soomaliya 29.10.2019. 13:49
Farmaajo oo baaq kasoo saarey gurmadka fatahaadaha
Soomaliya 28.10.2019. 20:09
Mas'uuliyiin ku naf-waayey Doon ku qalibmatay bartamaha Soomaaliya
Soomaliya 28.10.2019. 15:40
Ciidanka Dowladda oo Shabaab kala wareegay Moqokori
Soomaliya 28.02.2018. 10:52